I-Troutbeck Camping Pods - "Ullswater" - I-Airbnb
I-Troutbeck Camping Pods - "Ullswater"
Indlu encane ibungazwe ngu-Hannah
Ama-pods ethu amathathu afudumele futhi athokomele atholakala ngemuva kwepulazi elikhulu emi endaweni ethule ekude nomgwaqo futhi eduze kwe-beck encane. Ama-pods wonke anokushisa okungaphansi ngakho uqinisekisiwe ukuthi uzofudumala kungakhathaliseki ukuthi isizini.
Ngokufinyelela okuhle kakhulu ukusuka ku-junction 36 ye-M6, sitholakala phezulu kwesiGodi esihle saseTroutbeck, sinokubukwa phansi ngaseWindermere Lake. Idolobhana lethu linezindawo zokucima ukoma ezimbili, i-tearoom, nokufinyelela kalula e-Windermere nase-Ambleside. Ngeshwa asikwazi ukwamukela izilwane ezifuywayo
Ngokufinyelela okuhle kakhulu ukusuka ku-junction 36 ye-M6, sitholakala phezulu kwesiGodi esihle saseTroutbeck, esinokubukwa phansi kwe-Windermere Lake. Idolobhana lethu lihlinzeka ngendawo ekahle yeholide lakho ngama-pubs alo amabili amukelayo, igumbi letiye lesigodi kanye nokuba seduze nezibani ezikhanyayo ze-Windermere ne-Ambleside. Futhi siyakwazi ukufinyelela imizila yokuhamba ngezinyawo elandelayo:
• I-Wansfell Pike
• I-Kirkstone Pass
• Ulimi lwe-Troutbeck
• I-Garburn Pass, eholela ku-High Street nase-Kentmere